प्लट, संवाद र आवाज
तपाईं एक विद्यार्थी वा एक शिक्षक हुनुहुन्छ चाहे, यी लेखहरूले हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि संकेत गर्दछ भने काममा आउन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं राम्रो लेखन प्रेरित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रायः, बच्चाहरु अचम्म लाग्दछन् - भ्रष्ट, अपमानित, क्रोधित - आफ्नो विचारहरू कागजमा राख्दछन्, किनकि तिनीहरू पुरानो पुस्तक रिपोर्टहरू, निबन्धहरू र सारांशहरूसँग जोडिएका छन्। तर एक राम्रो लेखक बनने एकमात्र तरिका यो एक हो कि असाइनमेन्ट प्रेरणात्मक छ वा छैन कि छैन।
यदि तपाईं रेखा पछि खडा हुनुहुन्न र दृश्यहरू बनाउनुहुन्छ भने तपाईं अझ राम्रो 3-बिन्दु शूटर बन्न सक्नुहुन्न। लेखन एकै तरिका हो। तपाई त्यहाँ त्यहाँ पुग्नु र यसलाई जानुहोस्। यहाँ हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि केहि लेखन संकेतहरू छन् जुन तपाईंको वा मस्तिष्कमा केही कोठा साँस गर्न रुचाउँदा ती विचारहरू तपाइँहरूलाई वा तपाइँका विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिन सक्छ।
4-वस्तु 1-अनुच्छेद स्टोरी
चार चीजहरूसँग आउनुहोस्:
एक प्रकाश को एक विशेष स्रोत (एक चमकदार नीयन लाइट पढने: "21 र अधिक", एक flickering फ्लोरोसेंट बल्ब, चढाया रंगहरु को माध्यम ले चंद्रमा फिल्टरिंग)
एक विशेष वस्तु (ब्लेड कपाल संग एक गुलाबी बालबालिका ब्रस्टल्स मा डुबकी, एक डेली पेंटिंग को एक खारिज प्रतिकृति, एक बच्चा रब्बिन, एक rickety घोंसले देखि यसको मोबाईल सिर poking)
एक omomatopoeia को उपयोग एक ध्वनि (एक कोब्लेस्टोन स्ट्रीट मा एक ग्लास बोतल रिकोचेटिंग को पिंगिंग , एक आदमी को जेब मा सिक्के को एक मुट्ठी को चिपक , लाउंड्रोट को नजिकै पुरानो महिला को धूम्रपान गर्न को लागी फुटबल मारने वाला गीला विभाजन )
एक विशिष्ट स्थान (ब्रुक्सस सेन्ट र6औं एभ, को बीच डाइनी गली, गिलास बकर, गर्म प्लेट्स, र औपचारिकdehyde मा तैरने माढकहरुलाई खाली विज्ञान कक्षा, फ्लोनिगन को पब को अंधेरे, धुआंटी इंटीरियर)
जब तपाइँ सूची सिर्जना गर्नुभएपछि, चारवटा वस्तुहरू र तपाइँको छनौटको एक एकल नायक प्रयोग गरी एक अनुच्छेद कथा लेख्नुहोस्।
कथालाई छोटो रूपमा नायकलाई परिचय गराउनु पर्छ, उसलाई एक संघर्ष (ठूलो वा हल्का) मार्फत राख्नुहोस् र संघर्षलाई एक तरिका वा अर्कोमा समाधान गर्नुहोस्। यदि तपाईं सूची वस्तुहरू सम्भव भएसम्म अनियमित रूपमा राख्नुहुन्छ र अन्त्यमा सबै सँगै राख्न राख्न यो धेरै रमाइलो छ। सूची सिर्जना गर्नु अघि तपाइँको कथा योजना नगर्नुहोस्!
विद्यार्थीले प्रत्येक सूची वस्तु (प्रकाश, वस्तु, आवाज र स्थान) पेपरको पर्चीमा लेख्नु पर्छ र त्यसपछि तपाईंको डेस्कमा प्रत्येक अलग रूपमा चिन्हित बाकसमा राख्नुहोस्। कथा लेख्नका लागि, विद्यार्थीहरूले प्रत्येक बक्सबाट वस्तुहरू अवस्थित गराउन र पछिको कथा लेख्नका लागि, निश्चित गर्न सक्नु हुन्छ कि उनीहरूको वस्तु चयन गर्न सक्नु अघिको कथा हो।
पागल लिरिकल वार्ता
Http://www.lyrics.com जस्तै गीत वेबसाइटमा जानुहोस् र अनियमित रूपमा एक गीत चयन गर्नुहोस्, अधिमानतः तपाइँले कहिल्यै सुनेको छैन वा एक व्यक्ति को तपाईंलाई गीत थाहा छैन। उदाहरणका लागि, म वेबसाइटमा गए र चुनेको छ, फेर्गेईको "ए लिट्टिभ पार्टीले कहिल्यै कसैलाई मारेको छैन (सबै जना पाइन्छ)।" मैले गीत कहिल्यै सुनेको छैन र गीतहरू सुनेको छैन।
त्यसपछि, गीतको माध्यमबाट स्क्रोल गर्नुहोस् र क्र्याजिक लाइयर चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि स्कूलको लागि उपयुक्त हुनेछ। Fergie गीतमा, मैले चयन गरे, "तपाई के सोच्नुहुन्छ, GoonRock?" किनकि यो त्यहाँ मा पोषण शब्द थियो।
यस प्रक्रियालाई दुई चोटि दोहोर्याउनुहोस्, दुई थप गीतहरू र दुई थप पागल गीतहरू चयन गर्नुहोस्।
त्यसपछि, पहिलो lyric सँग वार्तालाप सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंले दुई व्यक्ति बीचको वाक्यांश प्रयोग गर्न सम्भावना चयन गर्नुभयो। उदाहरणका लागि, मैले केहि लेख्न सक्दछु, "तपाई के सोच्नुहुन्छ, GoonRock?" चाची आयोले बर्नीलाई भने, सेरेनिटी मीडोज्स एस्स्टेड लिभिंग सेन्टरमा दुई व्हीलचेयरहरू टाढा थिए।
एकपटक तपाईंले कुराकानी गरिसकेपछि, अन्य दुई गीतहरू अन्य ठाउँमा घुसाउनुहोस्, कुराकानीलाई परिवर्तन गर्नको लागि दुई क्यारेक्टरहरू बीचको भावनालाई बुझ्दछ। जारी राख्नुहोस् जबसम्म तपाइँ वार्तालापको साथ समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ, एक क्यारेक्टरको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने एक रिजोल्युसनको साथ।
विद्यार्थीहरूले आफैं असाइनमेन्टको पहिलो भाग पूरा गर्दछन्, त्यसपछि तिनीहरूका साथ मान्छेसँग गीतहरू आदानप्रदान गर्नुहोस् ताकि उनीहरूको तीन सेटको साथ तिनीहरूले कहिल्यै देखिनन्।
संवाद लम्बाइ वा एक्सचेंजहरूको संख्या निर्धारण गर्नुहोस् र विराम चिह्न दिनुहोस्।
तीन लोकप्रिय वर्णहरू छान्नुहोस्। तिनीहरू कार्टुन क्यारेक्टरहरू हुन सक्छन् (रेन र स्टिमपाइबाट रेन्च र स्मिम्पी, मिशेलान्जेलबाट TMNT बाट), खेलाडीहरू वा उपन्यासहरू, (ब्वाइलाइट सीरीजबाट बेला, रोमियो र जूलियटबाट बेला) वा फिल्महरू वा टिभि शोबाट क्यारेक्टरहरू (ब्रेहेहार्ट) बाट विलियम वालेस " , जेस "नयाँ केटी" बाट)।
एक लोकप्रिय परी कथा छान्नुहोस्। (स्नो व्हाइट र सात बौने, गोल्डिलकक्स र तीन बियर , हंसल र Gretel, आदि)
तपाईंको छनौट गरिएको क्यारेक्टरको प्रत्येक प्रयोग गरी तपाईको चयनित परी कथाको तीन, एक अनुच्छेद सारांश लेख्नुहोस्। टम थम्बको विलियम वालेसको संस्करण बेला स्वानको कसरी फरक छ? विवरणहरूको बारेमा प्रत्येक चरित्रलाई ध्यान दिनेछ, शब्दहरू वा तिनले प्रयोग गर्थे, र टोनमा कथा वा सम्बन्धित कुरा गर्दछन्। बेलाले टोम थम्बनको सुरक्षाको बारेमा आश्चर्यचकित हुन सक्छ, तर उदाहरणका लागि विलियम भ्याले तिनलाई आफ्नो बहादुरीमा प्रशंसा गर्न सक्छन्।
एक उपन्यास मार्फत वा तपाईंको विद्यार्थीहरूसँग खेल्न पछि, एक क्यारेक्टर प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई असाइन गर्नुहोस्। त्यसपछि, तपाईंको विद्यार्थीहरूले तृतीयमा खेल्ने खेल वा एक तीन अध्यायको दृष्टिकोणबाट उपन्यासको एक अध्यायको सारांश लेख्नका लागि समूह बनाउँदछ।
टेस्ट वा अन्तिमको लागि अध्ययन कसरी गर्ने
सौंदर्य मा दार्शनिक उद्धरण
बेशक प्रश्नहरूको परिचय
जेम्स पेटरसन जीवनी
रोमन क्यालेन्डर टर्मिनलजी
बिस्मार्क राज्य कलेज प्रवेश
म्यूनिख ओलम्पिक नरसंहारको बारेमा जान्नुहोस्
एक कर्भेट फाइबरस्स शरीरमा क्रैक कसरी मरम्मत गर्ने
दृश्य कलामा ताल पत्ता लगाउँदै
चरणद्वारा क्रिसमस ट्री चरण ड्राउनुहोस्
20 मजेदार वेबकमिक्स अनलाइन आजको
सेन्टर कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
उत्तर कोरिया चुटकुले
मानव ब्याट्री प्रदर्शन
बेन बल्बन अन्तर्गत विलियम बटलर याइट्स द्वारा
पहिलो 10 एकेके नाम दिनुहोस्
गिलियन फलिनद्वारा 'गोन गर्भ' - पुस्तक क्लब छलफल प्रश्नहरू